RFID ဘားကုဒ်အိတ်ဆောင်ဒေတာများကို Terminal နှင့်, RFID Handheld ဒေတာများကို Terminal နှင့်
LF / HF Reader ကို, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Reader ကို HPD805S Portable Data Terminal, HPD805S Portable Terminal, Passive UHF PDA, RFID & Barcode Portable Data Terminal, RFID Barcode PDA, RFID Handheld ဒေတာများကို Terminal နှင့်, RFID Handheld Terminal
Scanning 1D code and QR code, optional RFID(LF / HF / လှိုင်းနှုန်းသည် UHF).
CPU ကို Dominant frequency: MT6572 dual-core ကို
မှတ်ဉာဏ်: 512ကို MB + 4GB(optional ကို 1GB + 8GB)
တို့: Resistive ထိ
ပြသ: 3.2 240 × 320TFT လက်မ
ဆက်သွယ်ရေး: ဝိုင်ဖိုင်, ဂျီပီအက်စ်, ဘလူးတုသ်, ရေဒီယို, WCDMA / EDGE / ဂျီအက်စ်အမ်, ယူအက်စ်ဘီ, UART
THE: အန်းဒရွိုက် 4.2
ပြင်ပ input ကို: 27 အပြည့်အဝကီးဘုတ် input ကို, အသံ input ကို
output: စတီရီယိုစပီကာအထွက်, ဗီဒီယိုပြန်လည်ပြသခြင်း
SD က / TF: reserve TF ကိုင်ဆောင်သူ
standby လက်ရှိ: ≤3mA
ဘက်ထရီဗို့: 3.6V ကို ~ 4.2V
standby အချိန်: ≥7ရက်ပေါင်း
cell ဗို့: AC အ 100-240V,50/60Hz
RFID တိုးချဲ့(optional ကို):
-LF: 125kHz,uem4100; Reading အကွာအဝေး: 0~ 15cm; အလုပ်လုပ်လက်ရှိ: 60mAh ဘက်ထရီ;134.2kHz,ISO11784 / 11785; Read-ရေး diatance: 0~ 15cm; အလုပ်လုပ်လက်ရှိ: 80mAh ဘက်ထရီ
-HF: 13.56MHz,ISO14443A / ISO14443B / ISO15693; Read-ရေးအကွာအဝေး: 0~ 6cm; အလုပ်လုပ်လက်ရှိ: 90mAh ဘက်ထရီ
-လှိုင်းနှုန်းသည် UHF: 840MHz ~ 960MHz,EPC Class1 Gen2 နှင့် ISO18000-6C နည်းပညာဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီ; Read-ရေးအကွာအဝေး: 0~3မီတာ; အလုပ်လုပ်လက်ရှိ: 500MA-1500mA
ကင်မရာ: 5.0 သန်း Pixels
end-အသုံးပြုမှုအပူချိန်: -15℃ ~ + 65 ℃
Stroage အပူချိန်: -20℃ ~ + 80 ℃
Shell ကပစ္စည်း: ကို ABS အင်ဂျင်နီယာပလပ်စတစ်
အတိုင်းအတာ: L170 × W68 × H34mm
HPD805S isawireless RFID & Barcode handheld terminal, which is equipped with Android intelligent operating system. It adopts the industrial appearance design and hasastrong expansion ability. It can expand RFID (low-frequency, high-frequency, ultra-high-frequency), one-dimensional barcode scanning, two-dimensional barcode scanning, ZIGBEE wireless communication, စသည်တို့ကို, and has been widely used in various industries of the Internet of things.
HPD805S handheld terminal with WIFI, ဘလူးတုသ်, ဂျီပီအက်စ်, China Unicom 3G, 500W camera, cost-effective. The UHF function cannot be equipped withacamera at the same time. The barcode is compatible with SE955\_Honeywell N4313.
I am interested in your product RFID Handheld Data Terminal, RFID ဘားကုဒ်အိတ်ဆောင်ဒေတာများကို Terminal နှင့်